Inona no atao hoe bitcoin debit karatra?
A bitcoin debit de crédit dia VISA na Mastercard izay azonao ampiasaina mba hividy entana sy asa avy aterineto sy ivelan'ny aterineto fivarotana na hiala vola avy amin'ny ATM. Mandritra izany fotoana izany dia mivantana tohanan'ny bitcoin vola. Bitcoin debit karatra ho mora ny fidirana amin'ny cryptocurrency mandany vola na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao.
Inona no karazana bitcoin debit karatra misy?
Ny karatra plastika debit bitcoin toa tsotra VISA na Mastercard izay azonao ampiasaina toy izany koa. Ny virtoaly bitcoin debit karatra dia navoaka an-tserasera ny tsipiriany mitovy ho toy ny fitsipika debit karatra. The cardholder anarana, daty ny fahataperan'ny sy ny CVC / CVV Laharana dia omena amin 'mba, nefa tsy misy phsyical famokarana manao mora kokoa sy haingana kokoa ny miditra ny vola.
Ahoana no ahafahako mampiasa ny debit bitcoin karatra?
Azonao atao ny mampiasa ny debit bitcoin karatra toy izay prefunded debit karatra. Afaka mandany ny fifandanjana ny karatra ho an'ny mividy entana sy ny asa ao amin'ny toeram-pivarotana eo an-toerana, na amin'ny fivarotana an-tserasera. Raha manana karatra plastika bitcoin debit, dia afaka hiala vola avy amin'ny ATM. Azonao atao koa ny mampiasa ny bitcoin debit fividianana karatra hanaovana an-toerana sy ny sehatra iraisam-pirenena roa.
Inona avy ireo vola dia afaka mampiasa ny karatra amin'ny debit bitcoin?
Bitcoin debit karatra mihazona ny vola eo amin'ny Fiat misy afa-tsy vola bitcoin. Ny tena malaza dia vola USD, EUR sy GBP. Ny vola azo teo toy ny toerana misy anao vola mifandray amin'ny bitcoin debit karatra vola, toy izany koa ny varotra natao ny karatra dia voalaza ao fa ny vola. Roa mpanome tolotra manokatra ny bitcoin debit karatra tsena ny vola bebe kokoa ihany koa. ankoatry ny zavatra hafa, Manolotra ihany koa ny mpamatsy bitcoin debit karatra miaraka amin'ny toerana misy anao vola in RUB, CNY, YJP, KRW, AUD sy ny CHF. Misy ihany koa ny mpanome tolotra manana ny safidy mba bola ny karatra miaraka amin'ny altcoins ihany koa afa-tsy bitcoin.
Ahoana no ahafahako hanafatra ny debit bitcoin karatra?
Mba manana karatra debit bitcoin, dia tsy maintsy misoratra anarana ianao amin'ny iray amin'ireo mpanome tolotra 'sehatra. Ny fisoratana anarana dia ahitana ny dingana manokana manome tsipiriany ny cardholder, toy ny anarana, daty nahaterahana sy toeram-ponenana. Ny fanazavana nomena dia tsy maintsy ho tò amin'ny sary ID sy ny porofo-ponenana. Izany dia mety ho volavolan-dalàna misy ny adiresin'ny ny caldholder. Rehefa mametraka ny lamina sy ny fomba fisafidianana ny sambo ny karatra plastika dia hatolotra eo an-tranonao. Raha efa hifidy ny virtoaly karatra, tsipiriany ny karatra dia namoaka ny adiresy mailaka. Raha tsy te-hizara vaovao manokana, dia afaka hanafatra iray tsy fantatra anarana bitcoin debit tsy misy fanamarinana ny karatra.
Afaka manana karatra debit bitcoin tsy misy fanamarinana?
Eny. Anonymous bitcoin debit karatra dia hita ao amin'ny mpamatsy roa eny an-tsena. Raha tsy te ho any amin'ny fanamarinana amin'ny alalan'ny dingan'ny manome sary ID sy ny porofo-ponenana, dia afaka mifidy iray tsy fantatra anarana bitcoin debit karatra. Amin'ity tranga ity na izany aza Tsara homarihina fa ny fetra azo ampiharina ho an'ny mpampiasa voamarina foana ambany ampitahaina amin'ny mpampiasa voamarina. Ary noho izany voafetra ihany habetsaky ny vola azo ampiasaina amin'ny tsy mitonona anarana bitcoin debit karatra ho takalon'ny ihany no nanome anarana ho aseho eo amin'ny karatra.
Mandra-pahoviana no tokony hatao mba handray bitcoin debit karatra?
Ny karatra plastika bitcoin debit dia namoaka ny VISA na Mastercard ary mila ny 2-3 herinandro mba handray azy ireo. Ny fe-potoana mba hahazo ny karatra dia arakaraka ny elanelana misy eo amin'ny karatra Ilaintsika sy ny cardholder. Fa fiampangana mazava fanampiny fanaterana azo voafantina rehetra ny mpanome tolotra. Amin'ity tranga ity ny karatra Efa voavonjy ao anatin'ny 2-5 business days with the services provided by DHL along with a tracking number.
Ahoana no ahafahako ambony ny iray bitcoin debit karatra?
Afaka ambony ny bitcoin debit karatra fomba maro hafa noho ny bitcoin. Azonao atao ny mampiasa tariby banky famindrana, bola na ny debit karatra sy ny fandoavam-bola hafa ho Neteller mpamatsy sy Skrill. Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra PayPal na izany aza dia tsy nanaiky fandoavam-bola amin'ny fomba noho ny fepetra.
Ahoana no ahafahako hiala vola avy amin'ny bitcoin debit karatra?
Afaka hiala vola avy amin'ny bitcoin debit karatra fomba mitovy araka izay mavesatra entana ny tantara. Afaka mandefa adiresy BitCoins hafa. Azonao atao ihany koa ny vola hiala any amin'ny banky na any amin'ny iray hafa mpamatsy fandoavam-bola, toy ny Skrill na Neteller. Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra PayPal na izany aza dia tsy teo anivon 'ny nanaiky ny fanesorana fomba bitcoin debit karatra.
No Hataoko hiala vola avy amin'ny ATM amin'ny bitcoin debit karatra?
Eny. Afaka hiala vola avy amin'ny ATM maneran-tany iray mampiasa karatra plastika bitcoin debit.
Ohatrinona ny vidin'ny karatra debit bitcoin?
Ny vola vidin'ny bitcoin debit karatra samihafa manerana ireo mpanome tolotra. Ny vidin'ny famoahana indray mandeha ny karatra plastika bitcoin debit dia eo 5-25 USD. Ny vidin'ny famoahana ny virtoaly bitcoin debit dia be karatra kely, dia afaka mahazo izany maimaim-poana amin'ny toerana sasany. Afa-tsy ny indray mandeha anatin'ny masonkarena ny karatra, isam-bolana kaonty fikojakojana dia voampanga saran'ny ao amin'ny habetsahan'ny 1 USD isam-bolana.
Ny raharaham-barotra ny vidin'ny karatra bitcoin debit no samihafa be, ny karatra lafo kokoa afaka kelikely kokoa saram barotra. Loading ny karatra dia matetika maimaim-poana, raha ny withdrawals dia voampanga miorina amin'ny karazana fidinao. Ny pos ary nividy an-tserasera azo voampanga amin'ny sarany raikitra na amin'ny prorata isan-jato. ATM withdrawals ireo voampanga eo 1.5-2.5% isan-barotra, withdrawals iraisam-pirenena vidin'ny more. Misy ihany koa ny saran'ny fandikan-teny vola dia voampanga, raha ny toerana misy anao vola dia tsy mitovy ny vola raharaham-barotra.
Inona avy ireo faritra misy ny bitcoin debit karatra?
Amin'ny toe-javatra sasany dia misy ambony indrindra habetsaky ny tahirim-bola dia afaka nampiditra ny bitcoin debit karatra. Izany fiantraikan'ny ny habetsaky ny vola dia afaka handany amin'ny karatra ary koa ny habetsaky ny vola dia afaka hiala amin'ny ATM. Mety hisy mpampiasa voamarina fetra ambony kokoa, ary koa ny sasany tsy manam-petra manome mpamatsy bitcoin debit karatra ho an'ny mpampiasa voasoratra anarana. Ny androm-piainany dia voafetra topup manodidina 2000 USD ny mpampiasa tsy fantatra anarana.
Inona avy ireo fanesorana ny ATM saram mifandray amin'ny bitcoin debit karatra?
Bitcoin debit karatra mpanome tolotra, rehefa nasain'i saram nialany vola avy amin'ny ATM. Zavatra sarany mety ho voampanga isaky ny raharaham-barotra na ny prorata. Ny an-toerana matetika no vidin'izany ATM withdrawals manodidina 1.5%, raha ny iraisam-pirenena dia voampanga ATM withdrawals amin'ny 2.5%.
Inona no atao hoe vola saran'ny fandikan-teny mifandray amin'ny debit bitcoin karatra varotra?
Sandam-bola dia voampanga saran'ny fandikan-teny raha ny toerana misy anao vola ny tantara mifandray amin'ny bitcoin debit karatra dia samy hafa oharina amin'ny vola ny raharaham-barotra. Amin'ity tranga ity raikitra 3% vola saran'ny fandikan-teny dia voampanga rehetra ny mpamatsy eny an-tsena.